मलाइकाको यो जलवा, देखेर भए सबै फिदा!!! – News Nepali Dainik
मलाइकाको यो जलवा, देखेर भए सबै फिदा!!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २२, २०७७ समय: २०:५३:४९
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोडा आफ्नो ग्ल्यामरस अन्दाज र बोल्ड लुकका लागि चिनिन्छिन् । यसपटक उनको सर्ट ड्रेस लुक भाइरस भएको छ । यस तस्विरलाई फ्यानहरुले निकै मन पराएका छन् । मलाइका सोशल मिडियामा निकै सक्रिय रहन्छिन् । यी अभिनेत्री आफ्नो फिटनेशको निकै ख्याल गर्छिन् । पछिल्ला दिन उनले आफ्नो फिटनेस फोटोज र भिडियोहरु शेयर गरिरहेकी छिन् ।
बहिनी अमृताले नै यी फोटो खिचेकी हुन् । दिदी मलाइका र नजिककी साथी करिना कपूरसँग अमृताले ३१ जनवरीमा आफ्नो ४३ औं जन्मदिनको खुसीयाली मनाएकी थिइन् । मलाइका अरोरा आफ्ना ब्वाईफ्रेन्ड अर्जुन कपूरसँगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा रहन्छिन् । मलाइकाले २०१७ मा अरवाज खानसँग डिभोर्स गरेकी थिइन् । यो जोडीका एक छोरा अरहान खान १९ वर्षका भइसकेका छन् ।
Last Updated on: February 4th, 2021 at 8:53 pm